Fitsarana ireo mpitsidika ny bilaoginao
Alakamisy, Septambra 27, 2012 Alakamisy, Septambra 27, 2012 Cassie
Ny famahanam-bilaogy vahiny dia dingana sarotra sy marefo izay tokony horaisina toy ny fiandohan'ny fifandraisana: matotra sy mitandrina. Amin'ny maha tompona bilaogy ahy dia tsy afaka milaza aminao aho hoe impiry aho no nandefa mailaka tamin-tsoratra mahatsiravina sy mailaka. Ny bilaogy, toy ny fifandraisana, dia miezaka mafy ary ny mpitoraka bilaogy mety ho mpitsidika dia tsy tokony hitondra izany ho dingana tsy misy dikany.
Ireto misy toro-hevitra azo antoka momba ny fiarahan-toerana 7 ho an'ny afisin'ny mpitsidika hampiakaranao bilaogera:
1. Fantaro ny mety ho lalao
Alohan'ny handatsahanao baomba ny mpitoraka bilaogy iray amin'ny alàlan'ny lahatsoratra na fandefasanao lahatsoratra dia fantaro mialoha ilay bilaogera.
Vakio ny pejy momba azy ireo, fantaro ny anarany, araho izy ireo ao amin'ny Twitter, ary mamakia lahatsoratra bilaogy vitsivitsy hahafantarana ny feon'ny bilaogin'izy ireo.
Raha tena te-hanao fahatsapana ianao dia avelao ny fanehoan-kevitra ao amin'ny lahatsoratr'izy ireo, valio ny bitsik'izy ireo, zarao amin'ny tamba-jotra ny lahatsoratr'izy ireo.
Mieritrereta hevitra lahatsoratra vitsivitsy izay mety amin'ny bilaogy. Inona no tsy hita amin'ity bilaogy ity? Inona no mety? Jereo hoe inona no mitranga any amin'ny akany sy izay lazain'ny olona ao amin'ny media sosialy.
2. Ataovy ny hetsika voalohany
Ok, nametraka fahatokisana tamin'ny bilaogeranao ianao ary vonona ny hitondra ny fifandraisanao amin'ny sehatra manaraka. Fantatrao fa ity bilaogy ity dia mety tsara ho anao ary manana hevitra momba izay tianao apetraka na atolotra ny bilaogera ianao. Izao no fotoana tokony hifindranao.
Rehefa avy namaky ny fitsipiky ny bilaogera ianao dia mifandraisa amin'izy ireo amin'ny alàlan'ny fampitaovana tiany. Raha tsy mitanisa torolàlana na fomba fifandraisana tianao amin'ny bilaoginy izy ireo dia anontanio izy ireo!
Rehefa mifampiresaka dia manaova toetran'olon-kafa! Ampahafantaro azy ireo hoe iza ianao ary maninona ianao no mifandray amin'izy ireo — handefa vahiny!
3. Mahalalà olona
Tahaka ny hanokafanao varavarana ho an'ny vehivavy iray, dia toy izany koa ny bilaogera.
Amboary mora ho an'ny bilaogera. Raha vantany vao natolotra ny lahatsoratrao (mifanaraka amin'ny torolàlana momba azy ireo), ampio sary ary fenoy ny fampahalalana WordPress fanampiny. Ity dia mety ahitana tag, sary asongadina ary takiana SEO.
Hamarino tsara fa misy sary ampiasaina ary tsy misy fitsipi-pitenenana na tsipelina diso. Mety ho hita miharihary izany, saingy ny fiheverana voalohany dia ny zava-drehetra raha resaka fifandraisana sy bilaogy vahiny no resahina.
4. Aza atao Clinger
Raha mandefa ny hafatrao ianao ary tsy hiakatra amin'io andro io na ny ampitso aza, aza manodinkodina ny tompon'ny bilaogy — toy ny tsy hiantsoana na handefasanao SMS ny datinao rehefa manomboka manorina fifandraisana ianao !
Aorian'ny telo ka hatramin'ny fito andro, mandefasa tweet na mailaka fisavana tsy mandrahona. Aza tsy mahalala fomba!
Zahao ao amin'ny kaonty bilaogy na Twitter raha hijery hetsika vao haingana; tsy misy fanavaozana vaovao mety hidika hoe sahirana amin'ny zavatra hafa ilay bilaogera.
5. Mirehareha amin'ny fifandraisanao vaovao
Rehefa mamely azy am-pitiavana ianao, ny ankamaroantsika dia te hiantsoantso eo an-tampontrano. Raiso am-pientanam-po toy izany koa ny hafatrao navoaka.
Raha vantany vao mandeha mivantana ny hafatrao dia zarao amin'ireo tambajotra sosialinao. Tian'ireo bilaogera ny mahita ireo lahatsoratra zaraina ara-tsosialy! Ny fahazoana lahatsoratra bilaogy tsara kalitao dia toy ny sakafo hariva mahafinaritra ary ny fizarana ara-tsosialy no creme brûlée!
6. Aza manararaotra
Misy olon-kafa reraky ny fanirian'ireo tompona bilaogy fanonerana ho an'ny vahinin'ny vahiny? Ny tianao holazaina dia manome atiny tsara kalitao, misy ifandraisany, misy fironana aminao aho ary tianao ny handoavako anao?
Miezaha miteny amin-katsaram-panahy amin'ny tompon'ny bilaogy fa tsy azonao atao ny mandoa azy ireo, saingy faly ianao mamaly ny fahalalahan-tanan'izy ireo amin'ny famoahana ny hafatrao amin'ny alàlan'ny fampifandraisana azy ireo amin'ireo bilaogera hafa sy fizarana sosialy ny lahatsoratrao.
Amin'ny ankabeazan'ny fotoana, ny tompona bilaogy dia ho tsara fanahy manery; tsy te hahalala afa-tsy hoe mahazo zavatra tsy ho ao anatin'ny fiarahana izy ireo fa tsy ampiasaina!
7. Miasa mankamin'ny fifandraisana maharitra
Ny mampiaraka, toy ny famahanam-bolongana ho an'ny vahiny, dia mety ho mandreraka; Rehefa hitanao fa mety tsara, apetraho amin'ny asa hitazonana ny fitsanganan'ny vahiny ho velona ny asa.
Mifandraisa amin'ilay bilaogera. Manohiza manoratra ho azy ireo, mandefa mailaka amin'izy ireo, mibitsika ary mampifandray azy ireo amin'ireo bilaogera hafa.
Ny fandefasana vahiny dia momba fananganana fifandraisana amin'ireo olona an-tserasera ary miharihary. Tsy fantatrao mihitsy, mety hanoro anao na hampahafantatra anao amin'ireo tompona bilaogy namana hafa mihitsy aza izy ireo.
Tags: Content Marketingbilaogy vahinyGuest posthaino aman-jery sosialy
Cassie Gray dia Search Media Networker amin'ny nomerikaianarantsika avy ary dia niasa tamin'ny marketing Internet nandritra ny dimy taona. Rehefa tsy mitoraka bilaogy izy na mijanona amin'izao fotoana izao amin'ny haino aman-jery ara-barotra sy haino aman-jery sosialy, dia tiany ny mandany ny fotoanany any an-tokotany amin'ny fitsangatsanganana, bisikileta ary lakana. Araho ao amin'ny Twitter @cassaleenie.
Oct 3, 2012 amin'ny 3: 00 AM
h izaho CAss, nofantsihinao io iray io. Tena tendrony mahafinaritra io. Ao anatin'ireto torohevitra ireto dia tsy noeritreretiko mihitsy hoe nahavita tendrony iray aho, rehefa manandrana manao bilaogy vahiny aho na manao bilaogy fotsiny ho ahy dia mitazona ny tongotro amin'ny tany aho ary mihevi-tena araka ny antonony. Misaotra indray.